အတွင်းပိုင်းရာဘာအပြင်ဘက်ရှိဖန်မျှင်ဖန်မျှင်ကိုပြွန်တရုတ်ကုမ္ပဏီလက်နှိပ်ပေးသူလက်ကားရောင်းသူနှင့် ၀ ယ်ယူမှုလျှော့စျေးထုတ်လုပ်ခြင်း - Dongguan Dabeini Electronics Co. , Ltd.
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > insulator တွင်လည်းလက် > silicone flberglass လက် > အတွင်းပိုင်းရာဘာအပြင်ဘက်ရှိဖန်မျှင်ဖန်မျှင်ပြွန်
အတွင်းပိုင်းရာဘာနှင့်ပြင်ပဖိုင်ဘာဖန်ဖိုင်ဘာပြွန်ကိုဆီလီကွန်ရာဘာကိုပြွန်ထဲသို့ထည့်ပြီးယက်ပြီးဖန်ဖိုက်ဘာထည့်သည်။ ထို့နောက်အပူချိန်မြင့်မြင့်မြင့်အတွက်ဆီလီကွန်ဗဓေလသစ်ဖြင့်ဖုံးသည်။ ကောင်းသော insulator တွင်လည်းနှင့်အပူချိန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးရှိပါတယ်။
အတွင်းရှိရာဘာနှင့်ပြင်ပဖိုင်ဘာဖန်မျှင်ဖန်ထည်များအတွက်အထူးမြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသောပစ္စည်းများပေါင်းစပ်ထားခြင်းကြောင့်မြင့်မားသောအပူထည်သည်အခြားအလားတူပစ္စည်းများအစားထိုးရန်ခက်ခဲသောစရိုက်လက္ခဏာများရှိသည်။ မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်၊ အပူလျှပ်ကာစွမ်းဆောင်ရည်၊ လျှပ်စစ်ကာကွယ်နိုင်စွမ်းစွမ်းအား၊ ဓာတုတည်ငြိမ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်၊ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းရာသီဥတုအိုမင်းမှုစွမ်းဆောင်ရည်၊ အအေးခံနိုင်မှု၊ ရေခုခံနိုင်မှု၊ ရေနံခုခံနိုင်မှု၊ အိုဇုန်းလွှာခံနိုင်ရည်၊ ဗို့အားခုခံမှု၊ အန္တရာယ်ရှိသောထုတ်ကုန်။
အတွင်းရာဘာအတွင်းရှိ alkali-free ဖန်ဖိုင်ဘာနှင့်အပြင်ဘက်ဖိုင်ဘာဖန်မျှင်ဖန်လုံးပြွန်သည်အလွန်ပြင်းထန်သောဆန့်အားအင်ရှိပြီး၊ တွန့်ခြင်းနှင့်ကွဲခြင်းမရှိခြင်း၊ vulcanization ကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ လောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောလျှပ်ကာသွင်ပြင်လက္ခဏာများရှိသည်။ ၎င်း၏ဘေးကင်းရေးနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်၊ အလုပ်သမားများ၏ကျန်းမာရေးကိုထိရောက်စွာကာကွယ်ရန်နှင့်လုပ်ငန်းခွင်ရောဂါများဖြစ်ပွားမှုကိုလျှော့ချရန်။ အခြားထုတ်ကုန်များနှင့်မတူဘဲ၊ လူ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအလွန်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော။
အရည်ပျော်သောစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်လျှပ်စစ်မီးဖို၌အပူချိန်အလွန်မြင့်မားပြီးအပူချိန်မြင့်မားစွာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် (လျှပ်စစ်ဂဟေလုပ်ငန်း၌လည်းအလားတူဖြစ်သည်) အအေးနှင့်အစိုင်အခဲဖြစ်ပြီးနောက်ပိုက်သို့မဟုတ်ကေဘယ်လ်ပေါ်တွင်တံတွေးကိုဖွဲ့သည်၊ ၎င်းသည်ပိုက်သို့မဟုတ်ကေဘယ်ကြိုး၏အပြင်ဘက်ရှိရာဘာကိုခိုင်မာစေလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတွင်ထကြွခြင်းနှင့်အက်ကွဲ။ ထို့အပြင်အကာအကွယ်မဲ့ပစ္စည်းနှင့်ကေဘယ်များပျက်စီးသွားသည်။ အမျိုးမျိုးသော silica gels ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည့်အတွင်းရှိရာဘာနှင့်ဖန်မျှင်ဖိုင်ဘာဖန်မျှင်ဖန်ပြွန်သည်လုံခြုံစိတ်ချရသောအကာအကွယ်များစွာရရှိသည်။ အပူချိန်ခံနိုင်မှုသည် ၆၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိမြင့်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အရည်၊ သံ၊ ကြေးနီ၊ အလူမီနီယမ်စသည်တို့ကိုထိထိရောက်ရောက်ပိတ်ဆို့နိုင်သည်။ အပူချိန်မြင့်သောအရည်သွပ်သောပစ္စည်းများဖြန်းခြင်းသည်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိကေဘယ်များနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုပျက်စီးစေသည်။
ဤထုတ်ကုန်သည်အပူနှင့်အအေးခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ၁၈၀ စင်တီဂရိတ်အပူချိန်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်စဉ်ဆက်မပြတ်အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးအချိန်တိုအတွင်း 250C အပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်ကောင်းမွန်သောလျှပ်စစ်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်စက်မှုစွမ်းအားဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။
၎င်းကိုလျှပ်ကာမော်တာများ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အလင်းရောင်များ၊ လျှပ်စစ်အပူပေးစက်များနှင့်အခြားလျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ မီးစက်တပ်ဆင်ခြင်းများ၊ လျှပ်စစ်ဗို့အားပစ္စည်းများ၊ ကြီးမားသောအဆောက်အ ဦး များ၊
အတွင်းပိုင်းရော်ဘာအပြင်ဘက်ဖိုင်ဘာဖန်မျှင်ဖန်မျှင်၏ parameter များ:
အဖုံးသည်မြင်နိုင်သောကွဲအက်ခြင်း (သို့) အခွံမရှိခြင်း၊ မူလအရောင်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်သည်။
စမ်းသပ်မှုအပူချိန် 260 ±5â, 48 ± 1 နာရီဖြစ်ပါတယ်။
စမ်းသပ်အပူချိန် -70 ±5â, 60 ± 10 နာရီ။
နာရီပေါင်း 20000 နှင့်အတူအပူသက်တမ်းနှင့်အတူအပူချိန်အညွှန်းကိန်း
ကြိုတင်ရောင်းအား - ကြိုတင်အရောင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဖောက်သည်များနှင့်သက်ဆိုင်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များ၊ ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်များ၊ အရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်းများ၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများ၊
ရောင်းရန်: In-sale သည်ဖောက်သည်များအားအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စျေးနှုန်းအချိုးအစားဖြင့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုပေးသည်။ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းများပေးပို့ခြင်းနှင့်ပြcustomersနာများကိုဖြေရှင်းပေးရန်ဖောက်သည်များအားကြိုတင်တွက်ချက်ခြင်း။
A: The inner rubber and outer fiber glass fiber tube is woven with extremely high temperature resistant glass fiber. The surface silica gel is added with special materials such as appropriate flame retardants to make it have excellent temperature resistance and long-term continuous use. Range, -10℃～200â ", with or without cracks and cracks.
A: ကျွန်ုပ်တို့၏သမားရိုးကျအတွင်းပိုင်းရာဘာနှင့်ပြင်ပဖိုင်ဘာဖန်ဖိုင်ဘာပြွန်ဗို့အားကိုခံနိုင်ရည်အားပျမ်းမျှဗို့အား DBN-7000V, DBN-10000V အဖြစ်နှစ်မျိုးခွဲခြားထားသည်။
A: ကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းရှိရာဘာနှင့်ပြင်ပဖိုင်ဘာဖန်မျှင်ဖန်ထည်ပစ္စည်းများသည်မီးလျှံ။ အမေရိကန် UL စမ်းသပ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။
Hot Tags: insulator တွင်လည်းလက်, တရုတ်, အတွင်းပိုင်းရော်ဘာအပြင်ဘက်ဖိုင်ဘာဖန်မျှင်ဖန်ပြွန်ထုတ်လုပ်သူ, လက္ကား, ဝယ်, စျေးနှုန်း, အမြောက်အများ, လျှော့စျေး, quotation အ။
မီးစက် VPI နှစ်စီးခြင်းအတွက်အထူးဖန်ထည်ဖိုင်ဘာထည်